Somaliland: “Xukuumaddu Meel Bay Nagaga Dhacday, Casuumaddii Ay Naga Aqbashay Inay Nagaga Baxdaa…” - Wargane News
Home Somali News Somaliland: “Xukuumaddu Meel Bay Nagaga Dhacday, Casuumaddii Ay Naga Aqbashay Inay Nagaga...
“Idinkaa nagaga badan oo Xamar jooga, annaga cidiba nagama joogto oo Ismaaciil Buubbaa baa noogu dambeeyey oo waaka halkaa fadhiya..” Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar
Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar, ayaa sheegay inay Xukuumadda Somaliland kaga baxday Casuumad ay u fidiyeen oo ay ka aqbashay, hase-yeeshee nasiib-darro ay ka soo qaybgeli wayday Shirweynaha Beelaha Garxajis oo shalay lagu soo gebo-gabeeyey magaalada Hargeysa oo uu laba cisho ka socday.
Suldaan Cismaan waxa uu sheegay in Xukuumaddu kaga baxday Casuumadda ay u fidiyeen ee ay markii hore ka aqbashay aad uga xun yihiin, isla markaana ay noqonayso Godob Garxajis ay Xukuumadda talada haysaa ka gashay. Balse waxa uu intaas ku ladhay inaanay ku xag-xaganaynin, laakiin ay meel ugu qoran tahay, iyadoo maalin walba Masuuliyiinta Xukuumaddu ay ka qaybgalaan Shirar ay qabsadaan Qoysas aan Garxajis la sinnayn oo ay khudbado ka jeediyaan.
Waxa uu Suldaan Cismaan sidaa ku sheegay mar uu shalay ka hadlay xidhitaankii Shirka Tol-wanaaje ee Hargeysa lagu soo gebo-gabeeyey, waxaanu Suldaan Cismaan oo Beelaha Somaliland la hadlayaa, yidhi; “Halkan Eray Xamar ah baa ka yeedhay, Berigii aad isugu kaayo tagteen ee Somaliland oo dhami isu kaayo raacday ayaannu ugu dhawayn Xamar. Waxaan leeyahay kol haddaannu nabaddii qaadannay oo ta maanta lagu fadhiyo qoladayada xaggaa xigtaa Gaashaammo ka soo bilawnay oo waataannu idiin keennay, idinku noomaydaan iman oo noomaydaan soo ergeyn nimankiinnii isagu kaayo tegay.”
“Waxaan leeyahay Xamar beriga aannu nabadda qaadannay ayaa intii yarayd ee nagu tirinayseenna aannu gogosheedii laabnay, immikana idinkaaba u badan haddaad tihiin Somaliland-ne, waxaad weli noogu xagxagaysaan ee marka Garxajis shirayo la odhanayo malaha Xamar baa ku jirta maan garanne. Bahasha idinkaa u badan oo Xamar-ba jooga, annaga cidiba nagama joogto, Ismaaciil Buubbaa baa noogu dambeeyey oo waaka halkaa fadhiya, markaa waxaan leeyahay waar Xamartaa hannalaga daayo.” Sidaa ayuu yidhi Suldaan Cismaan.
Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar oo Marti-qaadka Xukuumaddu kaga baxday ka hadlayaa, uu yidhi; “Xukuumadda waannu casuunnay, way naga aqbaleen Casuumaddii aannu u geynay, Askar bay noo soo direen, wakaa Bilayski nala joogo. Laakiin, waxaa nasiib-darro ah Xukuumaddii aannu casuunnay ee aannu Kaadhadhka u geynay malaha Shaydaankaa nooga dambeeyeyoo Maanta (shalay) Shirkan kamay soo qaybgelin. Taana waxaan leeyahay Xukuumaddu waxay ka qaybgashaa iska daa Qabiil weyn oo Garxajis oo kale ahe Qoys yar oo meel ku shiray bay ka qaybgalaan waagii beryaba oo ay ka dhex-qudbadeeyaan.”
“Waxaan leeyahay taas Cidna ka qarin mayno oo waa noo godob, waa Godob Garxajis, Xukuumadduna meel bay nagaga dhacday, in Garxajis oo dhan oo isu yimi oo aad Marag ka tihiin ay Casuumaddii kaga baxdo oo ay soo xaadiri waydo waa noo godob ee ogaada. Laakiin, waxaan ku darayaa xag-xagan maynee way noo qornaanaysaa inta wakhtigeeda ka hadhay, dalkuna doorasho ayuu u socdaa.” Sidaa ayuu yidhi Suldaan Cismaan.
Suldaan Cismaan Suldaan Cali Madar
Malta: Somali women stalked by rape as they migrate
Somaliland: Gollaha Guurtida oo Sheegay in Doorashadu Dhacayso November 15/ 2016-ka.
Somaliland: Kulmiye Ruling Party Officials Parley EU Special Envoy for Somaliland, Somalia
Somaliland: Fadeexad Dul Hoganaysa Wasaradda Horomarinta Biyaha Iyo Shaqaale Isku Beel Ah Oo Shaqada Laga Caydhiyey